Odokotela Abahlinzayo Besifazane Bangenisa Emkhakheni Ogcwele Abesilisa – College of Health Sciences
Home » News » Odokotela Abahlinzayo Besifazane Bangenisa Emkhakheni Ogcwele Abesilisa
UKanyepi, odabuka eZimbabwe, wenza unyaka wesithathu njengoMabhalane oMkhulu we-Cardiothoracic Surgery Supernumerary. Wafunda esikoleni samantombazane wodwa, kanti ukhuliswe ngokuthi abantu besifazane bangenza noma yini. ‘Isiqubulo sasesikoleni sethu sithi “Gracia et Scientia”, okusho ukuthi ngomusa nangolwazi. Safundiswa ukwemukela ukuthi singabantu besifazane, safundiswa ukuzithoba nokuhlale siphokophele ukwenza izinto ngezindlela ezintsha.’
USolwazi Ncoza Dlova, iNhloko yeSikolo Sezokwelapha e-UKZN, kumjabulisile ukuzwa izindaba zethimba labantu besifazane bodwa elihlinzela inhliziyo. ‘Imikhakha ethinta ezokuhlinza idume ngokugcwala abesilisa kanti umnyango wezokuhlinzwa kwenhliziyo, ngaphansi kwesandla sika-Raj Madansein, uwuqedile lowo mqondo. Isithombe sethimba “labantu besifazane bodwa” besegumbini lokuhlinza siveza ukuthi lo mnyango usushintshe kangakanani ngokobuzwe nangokobulili. Ngihalalisela uDkt Madansein ngemizamo yakhe yokukhuthaza izisebenzi zakhe. Ufana nobaba, uyanakekela kanti izisebenzi zakhe ziyazifela ngaye.’